ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူ တိုက်စစ်မှူးနေမာ ယုံကြည်မှုရလာပြီဟု ဖာနန်ဒင်ဟိုပြောဆို ၊ ကစားသမားများ? - Yangon Media Group
ဘရာဇီးကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒင်ဟိုက တိုက်စစ်မှူးနေမာမှာ ယုံကြည်ချက်အပြည့် ဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပြီး ၄င်းအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် အသင်းကိုအပြောင်းအလဲ များရယူပေးနိုင်မည်ကို သံသယဖြစ်စရာမလို ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
နေမာသည် ပီအက်စ်ဂျီတွင်ရရှိခဲ့သော ခြေချောင်းရိုးကျိုးသည့်ဒဏ်ရာကြောင့် ဖေ ဖော်ဝါရီလအတွင်းက ခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရသူ ဖြစ်ပြီး ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှုမရသေးကြောင်း လတ်တလောအတွင်းပြောဆိုခဲ့အပြီးတွင် ကြာသပတေးနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့ကျင့် ရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
နေမာသည် ၂ဝ၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် လည်း နောက်ကျောရိုးကျိုးသည့်ဒဏ်ရာရခဲ့ ဖူးရာ လက်ရှိအချိန်အထိ အကောင်းဆုံးကြံ့ ခိုင်မှုမရသေးခြင်းက ဇွန်လ ၁၇ ရက်တွင် ကစားရမည့် ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အဖွင့်ပွဲအမီ ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရေးအတွက် သံသယ ဖြစ်စရာကောင်းနေသည်။
သို့ရာတွင် ဖာနန်ဒင်ဟိုက ”နေမာရ ထားတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးက အခုသက်သာချင်သက် သာနေပြီး နောက်ကျနာကျင်ချင်နာကျင်နေ တတ်တာမျိုးပါ။ ဒီလိုဒဏ်ရာမျိုးကို ကျွန် တော်လည်း ခံစားဖူးလို့ နေမာရဲ့အခြေအနေ ကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့ ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေက သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု တွေကိုကြည့်ရင် သူအဆင်ပြေနေတာတွေ့ ရမှာဖြစ်သလို ယုံကြည်မှုလည်းပြန်ရနေပါပြီ။ ခံစစ်ကစားသမားတွေကို အလိမ်အခေါက် လုပ်ဖို့လည်း ကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိတာမျိုးမတွေ့ ရပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်အမီ ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှုရဖို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည် ထားပါတယ်။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့အသင်း အတွက် အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မယ့်ကစားသမားဆိုတာ သံသယ ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး”ဟု ပြောခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘရာဇီးဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်သည် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်စာရင်း တွင်ပါဝင်နေသော ကစားသမားများ ဝတ် ဆင်ကစားမည့်ကျောနံပါတ်များကို ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အသင်းခေါင်းဆောင်သီယာဂိုဆေးလ် ဗားမှာ ယခင်က အဲလ်ဗက်စ်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိ သော နံပါတ် ၂ ကိုရွေးချယ်ထားပြီး မာဆယ် လိုက ရီးရဲလ်တွင်ဝတ်ဆင်ခဲ့သော ကျောနံ ပါတ် ၁၂ကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ပီလီနှင့် ဇစ်ကိုတို့ဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးသော ကျောနံပါတ် ၁ဝ ကို နေမာက ဆက်ခံမည် ဖြစ်ပြီး အထောင်တိုက်စစ်နေရာအတွက် ဖာ မီနိုနှင့်အပြိုင်ဖြစ်နေသော ဂျီဆက်စ်မှာ ကျောနံပါတ် ၉ ဝတ်ဆင်မည်ဖြစ်ကာ ကော် တင်ဟိုက နံပါတ် ၁၁ ဝတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
WLC-5 ရိုးရာလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲတွင် သပြေညို(Adventure)က ဖိုးလပြည့်(ရွှေဖူး)ကို အလဲထိုးပြီး အနိုင်ရရှိ
ပရိသတ်ကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော အပြုအမူအတွက် တိုဆန်တောင်းပန်
(၂၁)ရာစုပင်လုံ လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးများ ကဏ္ဍငါးခုခွဲ၍ သီးခြားစီ ကျင်းပ
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲ ယခင်နှစ်ကထက် မီးပုံးပျံ ၁ဝ လုံးခန့်လျာ့နည်း ဟ??
ရန်ကုန်အတွက် တွံတေးတူးမြောင်းမှ ရေကို မြို့သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း အပါအဝင် ရေရရှိရေး စီ??
မန္တလေးမြို့၌ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အကြို အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှ?
မဲပေါက်ထားသည့် တိုင်းအစိုးရအိမ်ရာ အခန်းပေါင်း ၇ဝဝ ကျော် နေထိုင်ခွင့်ကြန့်ကြာနေမှု ဂျပန်ချေ